Daraasad cusub oo lagu soo bandhigay 10-ka cayaaryahan ee ugu qiimaha sareeyaan iyo Neymar oo hogaaminaayo » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Daraasad cusub oo lagu soo bandhigay 10-ka cayaaryahan ee ugu qiimaha sareeyaan iyo Neymar oo hogaaminaayo
Daraasad cusub oo lagu soo bandhigay 10-ka cayaaryahan ee ugu qiimaha sareeyaan iyo Neymar oo hogaaminaayo
Ramzi Yare January 9, 2018
Shabakada caanka ah CIES’ Football Observatory ayaa sameesay daraasad cusub oo ku aadan qiimaha ay suuqa Yurub sida saxda ah cayaartooyda kaga qalmaan (Market Value).
Daraasadan kama hadleyso lacagaha ay koox cayaaryahankeeda dul dhigi karto iyo naadigii qiimahaas bixinaayo sida arinka Phillipe Coutinho oo haatan taagan kaasi oo 160-milyan oo euro ah Barcelona kaga soo iibsatay Liverpool.
Neymar ayaa CIES’ Football Observatory daraasada ay sameesay ku xaqiijisay inuu yahay cayaaryahanka ugu qiimaha sareeyo dhamaan xirfadlayaasha hada kubada cagta cayaaraan waxayna qiimahiisa saxda ah ee suuqa ku tilmaantay inuu yahay 213m euro ah.
Lionel Messi oo 30-jir ah ayaa kaalinta 3-aad kasoo galay xidigaha ugu qiimaha sareeyaan xiligaan kubada cagta asigoo qiimahiisa lagu sheegay 202.2m euro.
Harry Kane oo 24-jir ah ayaa sameeyay kobac aan caadi ahayn qiimo ahaan haatana CIES’ Football Observatory waxay daraasadeeda ku sheegtay in Kane yahay xidiga sedexaad ee caalamka ugu qiimaha sareeyo 194.7m euro.
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka cayaaryahan ee ugu qiimaha sareeyaan caalamka CIES’ Football Observatory soo daabacday:
Cristiano Ronaldo oo ah laacibka aduunka ugu wanaagsan xiligaan wuxuu ku jiraa kaalinta 49-aad ayadoo 32-jirkan lagu qiimeeyay 80.4m euros (£71.29m).
Dhinaca kale Coutino ayaa kaalinta 16-aad kasoo galay xidigaha ugu qiimaha sareeyaan caalamka wuxuuna qiimahiisa £33m ka hooseyaa midka Barcelona ku iibsatay oo ah £142m taasi oo ka dhigan qiimaha caadiga ah suuqa Yurub inuu yahay £109m.
Marc-Andre ter Stegen oo 25-jir ah ayaa noqday goolhayaha ugu qiimaha sareeyo xiligaan waxaana lagu qiimeeyay 96m euros (£85.13m).
Samuel Umtiti wuxuu oo 24-jir ah wuxuu noqday daafaca ugu qiimaha sareeyo caalamka xiligaan waxaana lagu qiimeeyay 101m euros (£89.56m).
Dhinaca kale Paulo Dybala oo 24-jir ah wuxuu noqday cayaaryahanka Serie A-da ugu qiimaha sareeyo waxaana lagu qiimeeyay £155.18m.
Robert Lewandowski oo 29-jir ah isagana wuxuu noqday cayaaryahanka Bundesligaha ugu qiimaha sareeyo waxaana lagu qiimeeyay £94.88m.
Dhinaca kale xidigaha Premier League ka cayaaraan ee 30-ka ugu sareyso kuwa ugu qiimaha sareeyaan caalamka hoos kaga bogo iyo mid walbo qiimahiisa saxda ah suuqa ka joogo:
Waqtiga ay Barcelona soo bandhigi doonto saxiixeeda labaad oo lasoo ogaaday – waa daafac halis ah.
Maxay ahaayeen Macnaha Erayada Af Carabiga ahaa ee ku qornaa Xabadka saxiixa cusub ee Barcelona Philippe Coutinho + SAWIRRO